अमेरिका–इरानको रोचक इतिहासः होला त तेस्रो विश्वयुद्ध ? « Kathmandu Pati
अमेरिका–इरानको रोचक इतिहासः होला त तेस्रो विश्वयुद्ध ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २३ पुष बुधबार ११:१५
काठमाडौं – अमेरिकी आक्रमणबाट इराकको राजधानी बग्दादमा इरानी सैनिक जनरल मारिएपछि इरान– अमेरिकाको सम्बन्धलाई लिएर विश्व तरंगित भएको छ । पछिल्लो चार दशक अमेरिका र इरानको सम्बन्ध कटू रहँदै आएको छ । कटुताको मात्रा भने फेरबदल भइरहन्छ । तर, ४ दशक अघि इरान र अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुरमात्र थिएन, इरानलाई सैन्य शक्ति बनाउन अमेरिकी सिप र प्रविधिको प्रयोग भएको थियो ।
सन् १८५० को जुनमा दुई देशका बीचमा कुटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको थियो । कुटनीतिक सम्बन्ध जोडिएपनि बिसौँ सताब्दीको मध्यसम्म इरानमा अमेरिका महत्वपूर्ण खेलाडी थिएन । अमेरिका इरानलाई ब्रिटेन(बेलायत)को नजरले हेर्ने गथ्र्यो । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले इरानमा बेलायत र सोभियत युनियन (रुस) महत्वपूर्ण थिए ।
उपनिवेशको होडबाजीका कारण बेलायत र सोभियत युनियनप्रति इरान ढुक्क थिएन । साँस्कृतिक र भौगोलिक हिसावले बिराट इरान आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने प्रयासमा थियो । यस्तो प्रयास जसले इरानलाई बेलायत र सोभियत युनियनको चेपुवाबाट बाहिर निकाल्न सकोस । सन् १९२५ मा राजा बनेपछि रेजाले इरानको अर्थ र शासनब्यवश्थालाई ठीक पार्न सुधारका धेरै प्रयास गरे । त्यसैस्वरुप इरानी राजा रेजा पल्लबी शाहले अमेरिकी अर्थ्विद्हरुलाई नियुक्त गरे । अमेरिकाको विदेश विभागका सल्लाहकार रहिसकेका आर्थर मिल्सपावलाई अर्थमन्त्रीको हैसियतसहित इरानको अर्थव्यवश्था सुधारको जिम्मा दिइयो ।
रेजा पल्लबी शाहका छोरा मोहम्मद रेजा पल्लबी सन् १९४१ मा राजा भए । सन् १९५२ मा इरानी संसदले महत्वाकाँक्षी मोहम्मद मोसादेघलाई प्रधानमन्त्री चयन ग¥यो । उनले इरानस्थित ब्रिटिस ओइल कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरे । भूमीसुधार ऐन ल्याए ।
मजदुरको पक्षमा नीतिगत निर्णय गरे । सामन्तबादी कृषि प्रणालीको साटो आधुनिक प्रणालीको नीति लागू गरे । श्रमीक मोसादेघको पक्षमा र जमिन्दार बिपक्षमा बन्ने स्थिति देखियो । मोसादेघको लोकप्रियता र महत्वकाँक्षाले राजा पल्लबीलाई समेत तर्साउन थालिसकेको थियो । राजा पल्लबी आफ्नो अधिकार कटौति गर्न तयार नभएपछि मोसादेघले राजीनामा दिए । तर, जनदबाबका कारण राजा उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य भए । राजाले प्रयोग गर्दै आएका कतिपय अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो ।
सन् १९५२ मा डिविट डी ऐइसनआवर अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वा्चित भए । सोसँगै अमेरिकाको इरान नीतिमा परिवर्तन भयो । मोसादेघलाई पदच्युत गर्न अमेरिका राजीमात्र भएन, सोका लागि अगुवाइ नै ग¥यो । उनलाई हटाउनका लागि एक मिलियन डलर जे जसरी खर्च गरेपनि हुने गरी सिआइएलाई दिइयो । न्युयोर्क टाइम्स र वासिँङटन पोस्टले प्राप्त गरेका सिआइएका गोप्य दस्ताबेज अनुसार मोसादेघका विरुद्धमा प्रचारयुद्ध, प्रदर्शन गर्न सिआइएले रणनीति बनायो । अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रुजभेल्टका नाति क्रेमिट रुजभेल्ट जुनियर त्यतिबेला मध्य एशिया र अफ्रिकाका लागि सिआइएका प्रमुख थिए । उनैले मोसादेघलाई पदच्युत गराउने रणनीतिको नेतृत्व गरे । मोसादेघलाई कम्युनिष्टउन्मुख भएको तथा सोभियत सँघप्रति बफादार रहेको आरोप लगाइयो ।
राजाले इरानको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण कदम चाले । उनकै शासनकालमा इरानी राजतन्त्रको २५०० औँ बर्षगाँठ मनाइयो । उनले इरानलाई विश्वशक्ति बनाउने अभिष्टसहित स्वेतक्रान्तिको घोषणा गरे । इरानले आर्थिक र सैन्यदृष्टिले अभूतपूर्व तथा चमात्कारिक फड्को मा¥यो । अमेरिकाले इरानसँग हातहतियारको ब्यापारमात्र गरेन, न्युक्लियस हतियार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनाइदियो, प्रविधि सिकाइदियो ।
अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सको भन्दापनि उच्च आर्थिक बृद्धिदर इरानको थियो । पूँजी ४२३ गुणासम्मले बढ्यो । इरान सैन्य दृष्टिले बिश्वको पाँचौ शक्तिशाली देश बन्यो । महिलालाई पहिलेभन्दा धेरै अधिकार दिइयो । प्राविधिक क्षेत्रमा इरानले फड्को मा¥यो । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरियो । बिदेशिएका दक्ष जनशक्ति स्वदेश फर्किन क्रम चल्यो । इरान तेस्रो विश्वबाट एकाएक पहिलो विश्व बन्ने दिशामा अघि बढ्यो ।
‘पश्चिमाको पिछलग्गु राजा चाहिदैन, इस्लाम धर्म सँस्कृति मास्न पाइदैन’ भन्ने आशयका नाराले सडक ताते । सन् १९७७ देखि शुरु भएको इस्लामिक क्रान्तिले १९७९ मा मूर्तरुप लियो । धर्म्निरपेक्ष इरान इस्लामिक इरान बन्यो ।
२५ सयदेखि विभिन्न बँशका राजाले राज्य गरेको इरान गणतन्त्र बन्यो । राजा मोहम्मद रेजा पल्लबी निर्वा्सित भए । सर्वोच्व नेतासहितको शासनव्यवश्था संविधानमै लिपिबद्ध गरियो । तेहरानस्थित अमेरिकी दुताबास बिद्रोही समर्थित युवा समूहले कब्जामा लियो । दुताबासका अधिकारी र कर्मचारीहरु बन्धक बनाइए । घटनाक्रम यसरी विकसित भयो कि आजसम्म इरान र अमेरिका सदाजसो युद्ध मनोविज्ञानमा रहँदै आएका छन् । तेहरानसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध टुटेको ४० बर्ष वितिसकेको छ ।
अर्कोतर्फ आगामी निर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव बढाउन केही न केही गर्नै पर्ने दबाबमा राष्ट्रपति ट्रम्प छन् । बाहिरी पक्षसँग युद्ध जारी रहेको बखत आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गौण हुने गरेको अमेरिकी इतिहास छ । देशभित्र उतिसारो लोकप्रिय नभएपनि इराक युद्धका कारण जर्ज बुश दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वा्चित भएको विश्लेषण गरिन्छ । युद्धका क्रममा नेतृत्वको निरन्तरता महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
लरतरो बिदेश नीति तथा देशभित्रपनि हस्तक्षेपकारी निर्णय गर्न नसकेको बात खेपिरहेका ओबामाको दोस्रो कार्यकाल अनिश्चयको घेरामा थियो । निर्वाचनको केही समय पहिले अमेरिकाको सर्वाधिक खोजी र चासोमा रहेका अलकायदा प्रमुख ओशमा बिन लादेनलाई अमेरिकाले मा¥यो । लादेन हत्याका लागि ओबमाको नेतृत्वले जसैजस पायो । लरतरो ठानिएका ओबामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वा्चितमात्र भएनन्, एकाध स्मरणीय राष्ट्रपतिका रुपमा दर्ज भएका छन् । इतिहासका यी जोडघटाउ हिसावी मामिलामा माहिर मानिएका ट्रम्पले नगर्लान भन्न सकिन्न । तर, यत्तिमा चिज निर्भर हुने छैन ।